ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှာ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ရှိ မရှိ LIVE လွှင့်ဖြေရှင်း...! - Thadin
HomeNEWSကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှာ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ရှိ မရှိ LIVE လွှင့်ဖြေရှင်း…!
April 23, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှာ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ရှိ မရှိ LIVE လွှင့်ဖြေရှင်း…!
ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ မြမြ အသတ်ခံရသည်ဟုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအားပူးကပ်ပြီးပြောကြားသည်ဟုလူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့နေခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေနှင့် သတင်းမှန်အား Live လွှင့်ဖြေရှင်း
၁၀၇ ရပ်​ကွက်​အတွင်း နှစ်​ဆန်းတစ်​​ရက်​​နေ့တွင်​ ပရိတ်​တရားနာစဉ်​ မဇာခြည်​လွင်​ဆိုသူအား ရုတ်​တရက် ​မြမြဆိုသည့်​ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူး၍ ၄င်းအား သင်္ကြန်​အကြို​နေ့တွင်​ လည်​ပြီးပြန်​လာစဉ်​ Sweety Home စက်​ရုံမှ အမျိုးသားလုပ်​သား၃ဦးမှ အတင်းဆွဲ​ခေါ်၍မုဒ်ိန်းကျင့်​ခဲ့ပြီး ဓားများဖြင့်​ခုတ်​ထစ်​ကာ အ​​လောင်းအား ​မီမလင်းသည့်​ဓာတ်​တိုင်​ခြုံပုတ်​နားရှိ ​မြောင်း၏သုံ​ပေ​နေရာတွင်​မြုပ်​ထားသည်​ဟု ​ပြောဆိုခဲ့သည်​။
ယ​ခုအကိစ္စနှင့်​ပတ်​သက်​၍ ဆိုရှယ်​မီဒီယာအသုံးပြုသူများ စိတ်​ဝင်​စားလျက်​ရှိပြီး တာဝန်​ရှိသူများမှ စုံစမ်းရာတွင် ယ​နေ့နံနက်​နာမည်​စာရင်းများအားစစ်​​ဆေးရာ ​ကျောက်​စိမ်းဖိနပ်​စက်​ရုံတွင်​ မြမြဆိုသည့်​နာမည်​မရှိ​ကြောင်းသိရသည်​။
ကြောကျစိမျးဖိနပျစကျရုံမှ မွမွ အသတျခံရသညျဟုအမြိုးသမီးတဈဦးအားပူးကပျပွီးပွောကွားသညျဟုလူမှုကှနျရကျတှငျ ပြံ့နှံ့နခွေငျးနှငျ့ပတျသတျပွီးလကျရှိအခွအေနနှေငျ့ သတငျးမှနျအား Live လှငျ့ဖွရှေငျး
၁၀၇ ရပျ​ကှကျ​အတှငျး နှဈ​ဆနျးတဈ​​ရကျ​​နတှေ့ငျ​ ပရိတျ​တရားနာစဉျ​ မဇာခွညျ​လှငျ​ဆိုသူအား ရုတျ​တရကျ ​မွမွဆိုသညျ့​ ဝိဉာဉျ​ဝငျ​ပူး၍ ၄ငျးအား သင်ျကွနျ​အကွို​နတှေ့ငျ​ လညျ​ပွီးပွနျ​လာစဉျ​ Sweety Home စကျ​ရုံမှ အမြိုးသားလုပျ​သား၃ဦးမှ အတငျးဆှဲ​ချေါ၍မုဒျိနျးကငျြ့​ခဲ့ပွီး ဓားမြားဖွငျ့​ခုတျ​ထဈ​ကာ အ​​လောငျးအား ​မီမလငျးသညျ့​ဓာတျ​တိုငျ​ခွုံပုတျ​နားရှိ ​မွောငျး၏သုံ​ပေ​နရောတှငျ​မွုပျ​ထားသညျ​ဟု ​ပွောဆိုခဲ့သညျ​။
ယ​ခုအကိစ်စနှငျ့​ပတျ​သကျ​၍ ဆိုရှယျ​မီဒီယာအသုံးပွုသူမြား စိတျ​ဝငျ​စားလကျြ​ရှိပွီး တာဝနျ​ရှိသူမြားမှ စုံစမျးရာတှငျ ယ​နနေံ့နကျ​နာမညျ​စာရငျးမြားအားစဈ​​ဆေးရာ ​ကြောကျ​စိမျးဖိနပျ​စကျ​ရုံတှငျ​ မွမွဆိုသညျ့​နာမညျ​မရှိ​ကွောငျးသိရသညျ​။
This Month : 42931
This Year : 238329
Total Users : 597353
Total views : 2747019